Imikhiqizo ye-Grocery neye-PGI "Voglia di Natura" - Genoa
I-Mon - Fri: 16: 00 - 19: 30
NgoMgqibelo: Vula kuphela ekuseni
Ukudla - Natura
Izinongo, ama-legames nemikhiqizo ye-organic yabathandi bezinto ezinhle.
Isitolo sezitolo, Imikhiqizo ye-PGI nemikhiqizo yangempela efakazela isiko lesihle kakhulu lesiNtaliyane: lokhu nokunye okuningi kukunikaIsitolo sezitolo zasendulo "Isifiso Semvelo"ukuze IGenoa ehlanganisa isiko nokuqamba okusha ongakunikela Okuncono ufulawa, izinongo, izindunduma, ushokoledi nezinye izinto eziningi ezinhle, zithanda ukukhiqizwa kwendawo.
Imikhiqizo ye-Grocery neye-PGI "Voglia di Natura" - Ukuthandwa kwemikhiqizo yangempela yeminyaka engama-70 eGenoa
Isitolo sezitolo nokuhle Imikhiqizo ye-PGI wendawo, i-Legumes, okusanhlamvu, itiye kanye ne-infusions, ufulawa, ushokoledi, amaswidi nokunye okuningi okuhlala kukhetha izindlela zekhwalithi nobuqiniso:Isitolo sezitolo zasendulo "Isifiso Semvelo"ukuze IGenova. Lokhu kuqoqe ubufakazi bemisebenzi yangaphambilini ebesebenza kulo mkhakha iminyaka engama-70, kuletha umoya wokwenza izinto okuhlangene ovele wazihlanganisa kanye nemvelo ukuhlonipha isiko. Ngenxa yokubuyisela kabusha okusha okufaka izinto ezibonakalayo ezinkulu zemikhiqizo, uzothola indawo enhle yokwamukela izihambi futhi emnandi kakhulu.
Imikhiqizo ye-PGI neyeDrogheria egxile kukhwalithi nobuqiniso: izinsika zeVoglia di Natura
L'Isifiso Sokudla Kwasendulo Kwemvelo di Genoa ungathembela ekukhetheni okukhulu kwemikhiqizo eyenziwe ngendlela yangempela futhi uyakwazi ukunikela ngezinhlobo ezahlukahlukene ze- Imikhiqizo ye-IGP, imikhiqizo ye-vegan, yokungabekezeleli, i-gluten-free for celiac, izinto ze-gicheymet kanye namakhono endawo. Phakathi kwazo, uzothola mayelana: Izinhlobo ezingama-31 zikafulawa, Izinhlobo eziyi-9 zerayisi, Izinhlobo ezingama-50 zetiye kanye ne-infusions kanye nezinhlobo eziyi-18 izindunduma. Phakathi kwalokhu uzothola ezingokoqobo ubuhle be-gastronomic ezifana: lenti evela kuCastelluccio di Norcia, I-Teglio i-buckwheat ufulawa, i-Tuscan spelling kanye namachwane amantongomane, ubhontshisi weCorona, umhlaba kafulawa etsheni le-lava nezinye izinto eziningi ezikhethekile.
U-Antica Drogheria "Voglia di Natura" - Imikhiqizo yasendaweni ye-PGI nezinongo ezivela kuwo wonke umhlaba
Izibiliboco ezitholakala at Isifiso Semvelo zifaka nokuningi okuhle ushokoledi, artetan panettone, uswidi, i-nougat kanye nekhofi. Phakathi kwemikhiqizo ehlongozwayo: IVenchi, IBarbero, U-Albertengo, I-Vannucci, iGiovannacci. Ukwesekwa kwezinyosi, ushukela, usawoti nezithelo ezinamanzi kukhulu. Futhi ngisaqhubeka i confetti Khrispus, amakhambi, izinongo ezivela kuwo wonke umhlaba kanye nembewu. Phakathi kwezinhlobonhlobo eziningi ze izithelo omisiwe, uzothola IGP uVenetian Walnut futhi i I-PGI Piedmontese hazelnut.
"I-Voglia di Natura": Amabhasikidi kaKhisimusi kanye nokuxutshwa kwamakhambi kanye ne-infusions
Kanye nabaningi Imikhiqizo ye-PGI kanye nezimpahla eziningi ezitholakala unyaka wonke, ngesikhathi sikaKhisimusi "Isifiso Semvelo" isitolo sokudla ikunikeza kahle Izinhlobo ezingama-70 zikashokholethi okuhlukile ukwenza obhasikidi obumnandi kakhulu kaKhisimusi. Uzoba nekhono lakho namandla nekhono labasebenzi abazokusiza ukuthi ubhale kahle obhasikidi bakho futhi uzokujabulela ukukunikeza okungcono kakhulu izingxube of itiye, infusions kanye namakhambi elimnandi ngokwezidingo zakho. Konke lokhu nezinye izinto eziningi zokudlela ezinhle nobungcweti zilinde ukutholakala "Isifiso Semvelo" a IGenova.
Ikheli: ICorso Sardegna, 170R
I-POSTAL CODE: 16142
Ucingo: 010 0945656
Inombolo ye-VAT: 01989710999